I-Mountain Suite eNtsha kwindawo eyiNkulumbuso - I-Airbnb
I-Mountain Suite eNtsha kwindawo eyiNkulumbuso
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguSteve
Igumbi lokulala eli-1 elihle elakhiwe kwindawo entle yentaba yaseBrackendale. Relax kwaye wonwabele indalo epholileyo ejikelezileyo okanye wondle icala lakho elinomdla ngenye yeendlela ezininzi zokukhwela intaba okanye ukuhamba ngebhayisekile entabeni, zonke zisemnyango wakho. Embindini wayo yonke into phakathi kweWhistler neVancouver (imizuzu engama-45 nokuba yeyiphi na indlela). Ukufikelela ngokulula kwiindawo zokutyela ezibalaseleyo, iivenkile ezithengisa utywala kunye neecafe. Ziphe i-oasis yokubaleka kweli xesha lonyaka.
Yangoku, entsha 1 BR suite enomnyango wabucala. Ibhedi enye elingana neQueen kunye nendawo entle yokutsalwa. Inqanaba elisezantsi elinokukhanya okuninzi kwendalo. Ikhitshi eligcweleyo kunye nendawo yokuhlamba impahla. Uya kuba nayo yonke into oyifunayo kwikhaya lakho kude nekhaya.
Ikhompyutha eyenzelwe imidlalo yevidiyo
Indawo ezolileyo, yokuhlala kunye neyosapho. Imizuzu ukusuka e-Alice Lake kunye nezinyuko nje kude nenkqubo yendlela yodidi lwehlabathi; Umhlaba omangalisayo. Imizuzu eli-10 ukusuka eDowntown Squamish.
Ukufikelela ngokulula kwiHwy ukuya eWhistler okanye eVancouver.
Nceda uthumele i-imeyile ukuba unayo nayiphi na imibuzo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Squamish